မဆုံးတဲ့ အလွမ်း | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အခုလို ပြန်ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် အမ မိုးချိုသင်း
ညီမရေ အကိုတို့မိသားစုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၇ နှစ်က စပြီး အဖေ့ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ရဖူးခဲ့တာ။
ဒဏ်ရာတွေ ကြေမွနေတဲ့ မိသားစုတွေ
ခုလို ပြန်ဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ အမရေ။
မြတ်ကောင်းတို့ မိသားစု သူရို့အဖေကြီးရဲ့ အများအတွက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်မှုကို ဂုဏ်ယူ နိူင်ပါစေ။ လေးစားစွာ ဦးညွှတ်လျှက်....... အညတရ
အဲဒီကာလကတည်းက အဲဒီစာလေးကိုမဟေသီမှာ မဖတ်
တကယ်တော့ ကဗျာဆရာဆိုတာ အနူးညံ့ဆုံးနန်းကြိုးမျှင်
အမရေ ရင်နဲ့ အမျှခံစားသွားပါတယ်။
နံရံလေးဘက် ကာရံထားတဲ့ အခန်းထဲက ဘ၀ပေါင်းများစွာကို စာနာနားလည်စွာဖြင့်ပါ။
အမပြောသလို နာရီပြင်သမား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချိန်တွေကို ရွှေ့ ပေးနိုင်ရင်လည်းကောင်းသား။
အမရေ ဒီစာကို ဖတ်ရတာ လွမ်းဆွတ်စွာ ခံစားရပါတယ်...
အမရယ် - ဒီလို ဒုက္ခတွေ မြန်မြန် အရှင်း ပျောက်စေချင်လှပါပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က..မချိုသင်း ရယ်..အခု ငယ်ငယ်လေးရယ်.. နောက်ထပ်.. ငယ်ငယ်လေးများရယ်.. အတွက်..အလေးအနက်..အားပေး ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ဦးဇာဂနာ ပြောသလိုပဲ.. အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့..ကိန်းဂဏန်းတွေမှာ.. အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့..ဘ၀တွေကို နင်းချေဝါးမြိုဖို့ ကြိုးစားနေပေမဲ့..၀ိညဉ်တွေကို..အမြင့်ဆုံးမှာ လွှင့်တင်ထားနိုင်တဲ့..သူရဲကောင်းများအတွက်.. နံရံများ ပြိုလဲကျပါစေသား။
ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲတော်တော်လေး ထိခိုက်မိပါတယ်။ နံရံတွေကြားမှာ မတရားမှုများစွာဖြင့် ပိတ်ခံထားရသော သူရဲကောင်းများအတွက် အမှန်တရား အလင်းရောင်ဟာ သစ္စာဝိဥာဉ်များနှင့်အတူ မတရားမှုနံရံတွေကို ချိုးဖောက် ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။
စိတ်မကောင်းပါဘူးအမရာ။ စနစ်ဆိုးကြီးကို မုန်းတီးလှပါပြီ
အမရေ.. အခုလို အဖြစ်ဆိုးတွေကြုံနေရတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် အလွမ်းတွေ ကုန်ဆုံးပါစေ.. အချိန်တွေ ကုန်မြန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်.. စိတ်ထဲလည်း မကောင်းဘူး.. မတရားသက်သက်ကြီး ခံနေကြရတာ..
ကျွန်တော် ပြန်ဖတ်ချင်နေတာ အဲဒီ စာတစ်ပုဒ်ပဲ။
အစ်မရေ.. မိုးမခမှာ ဒီစာလေးကိုဆရာကြီးပုံနဲ့တွဲတင်ထားလို့ ထပ်ဖတ်ခဲ့သေးတယ်
အများပြည်သူ မကြည်ဖြူတဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိပြီး လူကြားဘယ်သွားရဲမှာလဲ။
သူတို့ က ကိုယ့်အရိပ်တောင် ကိုယ်ပြန်ကြောက်နေတဲ့ သူတွေ။
ထောင်ဒဏ်တွေကြီးကြီးချလေ သူတို့ ကြောက်ကြောင်း အသုံးမကြကြောင်းပေါ်လေပဲ။
ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖတ်ပြီး ဆွံ့အနေခဲ့တယ် အစ်မMCT. ရင်ဘတ်ထဲရောက်သွားတာ ဆိုတာ ဒါလားမသိဘူးဗျာ ၊၊
မိသားစုတွေရဲ့ နှလုံးသားတွေမှာ ဒဏ်ရာကိုယ်စီ အနာရွတ်တွေကိုယ်စီ ရှိနေကြရတာ ...
အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အမြန်ဆုံး ကုန်ဆုံးပါစေ.။
ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အမအဖေကို သတိရမိတယ်..
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းပါ အစ်မရေ။
“xxxxx အချိန်တွေ…..အချိန်တွေဟာ အကုန်မြန်လိုက်တာ။
အချိန်တွေ…..အချိန်တွေဟာ ကုန်နိုင်ခဲလိုက်တာ xxxxxxx။………………….”
နင့်နင့်သီးသီး လွမ်းတဲ့ဒါဏ်ရာတစ်ခုကို ကုန်လွယ်သွားတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အားမရဖြစ်မိလိုက်၊ ဘာသာဖြေသိမ့်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက်စိတ်ခံစားမှုအဖွဲ့ 
“xxxxx သူက ခေါင်းငုံ့လျှောက်တာ မကြိုက်ဘူး။
“ရဲရဲလျှောက်စမ်းပါ” တဲ့။ “ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လျှောက်စမ်းပါ” တဲ့။ သူက ချိုမြပေမယ့် ရဲရင့်တယ် xxxxxx ”………………
ဒါပဲလေ..ဓားသွားထက် ကလောင်သွားထက်ဆိုတာ။ အင်မတန်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာတစ်ဖက်မှာ ကျောက်ဆောင်ကျောက်သားပမာ မာကျောလို “့ ။ဒါကြောင့်ပဲသူ့ နှလုံးသားကစီးကျလာတဲ့စကားလုံးတွေဟာ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေကိုစိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တာ။ ကြောက်ရွံ့ စေခဲ့တာ။
“xxxxx ကျမက သူ့ကဗျာတွေ အသံထွက်ပြီးဖတ် သူက ဆေးလိပ်ဖွာရင်း နားထောင်။
အဲဒီအချိန်ကလေးတွေဟာ ကျမ အမြတ်နိုးဆုံးအချိန်တွေထဲက တခုမို့ လွမ်းဆွတ်မိတာ ပြောမပြနိုင်အောင်ပါပဲ။xxxxx”….
အင်မတန်မှ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့သန္တရသကလေး ကိုလွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ရလိုက်တယ်..
မဆုံးတဲ့အလွမ်း နဲ့ “နှလုံးသားထဲက ဒဏ်ရာ” ဟာ အတွင်း စိတ် ခံစားမှုနောက်ကို့ မျောပါခေါ်ဆောင်သွား နိုင်တဲ့ expressionism နဲ့ ဖွဲ့ ထားတဲ့ဝတ္ထုတိုကောင်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုချင်တယ်။ ဟိုးတုန်းထဲက ဖတ်ခဲ့ဖူးသား။ ခုတော့ဘလော့ဂ်ကျေးဇူးကြောင့် စာရေးသူကိုတိုက်ရိုက်ကြီး ကိုယ်မြင်တဲ့ ခံစားမိသမျှ ကွန်မန့် ပေးလို့ ရသွားပီ။
တောင့်တတိုင်းသာ ဖြစ်ရရင် ကျမဟာ နာရီပြင်သမားတယောက်ဖြစ်နေမှာပဲ... ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကို မှတ်မိနေတယ်...
ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကြားထဲက မိသားစုတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်...။
အဲဒီလို စိတ်ဒဏ်ရာတွေဟာ ခုဆို.. ထောင်သေးသေးတွေထဲက လူတွေနဲ့အတူ.. ထောင်အကြီးကြီးနဲ့တူတဲ့ ဗမာပြည်ထဲက မိသားစုတွေရော..တိုင်းပြည်ပြင်ပရောက်နေပေမဲ့ ထပ်တူခံစားပူဆွေးနေရသူတွေဆီမှာရော.. အတိမ်အနက်သာ ကွာမယ်.. ဒဏ်ရာရပုံချင်းကတော့ အတူတူပဲ ထင်တယ်နော်..။ အဲဒီ နံရံတွေကို မုန်းတယ်။
ငယ်ငယ်တို့ သားအမိအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းဘူး...။
ဒိထက်လေးနက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြောချင်ပေမယ့်
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားက
သန်းရွှေဆိုတဲ့ နာမည်တူတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရိုက်သတ်လို့ မကုန်အောင် ဖောင်းပွပေါများပေမယ့်...
နာမည်ကောင်းတဲ့ သမိုင်းနဲ့ လူသားပါ...။
တင်တဲ့စာနဲ့ အချိန်အခါ ကွက်တိပဲချိုသင်းရေ။ ငယ်ငယ်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ ရင်သွေးတွေ အတွက် ခွန်အားရှိတဲ့စာတပုဒ်ပါ။
မတရားမှုတွေရဲ့ နိဂုံးဆိုတာ ရှိကို ရှိရမယ်။
ဒီလောက်ယုတ်မာအောက်တန်းကျတဲ.ခွေသူတောင်းစားတွေ ဘယ်တော.များမှ ၀ဋ်လည်မှာလဲ
အနော့ဘလော့ကို လာလည်တာကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ အနော့ဘလော့ကတော့ ဆွဲဆောင်မှု လုံးဝမရှိပါဘူး။ အမဆီကို လာရင်တော့ အမစာလေးတွေကိုဖတ်ပြီး နစ်မြောပျော်ဝင်သွား တယ်။
မဆုံးတဲ့အလွမ်းကို ဖတ်ရတာ ရင်ကိုထိရှစေတယ်။ အရေးအသားသိပ်ညက်ညောပြီး ကောင်းလှတဲ့အမ
the maw naing said...
At that time I am still remember, I was in F.M.A, I was in 21 years old, after reading your story in MahayThi ,I know this is about Saya U Tin Moe, I told and showed to Saya U Sein Win, we told about your story , my comment is, this is notashort story, this isapoem. He told this one is different with others. He told your are one of the students in F.M.A. He told some more about recent about of Saya U Tin Moe.
I told other F.M.A member , this is about our great poet, read it, I want to tell to them, not only about your story , how our great poet are pressed by this government , I want other student to know about recent situation of our country, how nice poet are departed with his family, how he was brave, but the poet never bound. Your writing is nice.
My father is also from Myin Gyan also friend of Saya U Tin Moe, Saya U Sein Win, they met each other in Mandalay University. Since our child hood time my father always told about Saya U Tin Moe and his poems. We live in Taunggyi.
When my dad heard , Saya U Tin Moe was arrested,he told us, Ko Tin Moe is very delicate,decent and nice poet. How cruel this government on him.
This story wasastory first time to read among your other at that time.
I am still missing.